ကိုစီခရေဇီ ရေးတဲ့ virus များနှင့် ကခုန်ခြင်&#4 — MYSTERY ZILLION
ကိုစီခရေဇီ ရေးတဲ့ virus များနှင့် ကခုန်ခြင်&#4
May 2009 edited May 2009 in File Request
ကိုစီခရေဇီ ရေးတဲ့ virus များနှင့် ကခုန်ခြင်းဆိုတဲ့ Ebook လေးလိုချင်လို့ပါ။ ရှိတဲ့သူများ မျှပေးကြပါ။
:2: မျက်နှာအရမ်းငယ်တာပဲ။ ဘယ်သူမှလဲ မပေးဂျဘူး။ ( မသိချင်ယောင်ဆောင်နေဂျတယ်။ ဒီမှာ ကျနော့ဆီမှာ laptop တစ်လုံး task message လဲခေါ်လို့မရဘူး။ Search နဲ့ folder option လဲပျောက်နေလို့ဟာကို။ RPT နဲ့ လဲရှင်းပြီးသွားဘီ။ ဒါပေမယ့် Search နဲ့ Help and support ကတော့ ပျောက်နေတုန်းပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် ရှိတဲ့သူများ ပညာဒါနလေး မျှဝေဂျပါဗျာ။ ကျနော့ E-book က သူငယ်ချင်း ငှားသွားတဲ့ stick ထဲပါသွားလို့ပါဗျာ။ :2:
Hijickthis ဆိုတာနဲ့ စမ်းကြည့်ပါလား။ တခြားနည်းတွေလည်း mz မှာ တွေ့ဖူးတယ်။ ဘယ်နေရာလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။
[HTML]http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe[/HTML]Hijackthis နဲ့ အရင် စစ်။ ပြီးရင် restart လုပ်ရမယ်။ restart လုပ်ပြီးသွားရင် Registery:
...\_HEKY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_Current Version\_Policies ထဲက key တစ်ချို့ကို ဖျက်ရဦးမယ်။ nofolderoption ဆိုပြီးတော့ထင်တယ်။ virus ရန် ကင်းေ၀းပါစေ။
May 2009 edited May 2009 Registered Users, Moderators
စာအုပ်က ကျွန်တော်ဖတ်တောင်မဖတ်ဖူးဘူးဗျ။ အစ်ကို့စက်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ဇော်မော်လေး လုပ်ထားတဲ့ Enable 2.0 လေးသုံးကြည့်ပေါ့။
ကျွန်တော်လည်း MZ ဖိုရမ်မှာ အမြဲဝင်ကြည့်နေတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီလေး ရန်နောင်ပြောမှ ဒီမှာ ဒီလိုတောင်းထားတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်.. ကျွန်တော့် Blog မှာ ရေးထားတာကို သူသိပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖြေစေချင်လို့ သူက ကျွန်တော့်ကို မရမက ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ဖြေခိုင်းခဲ့တာပါ..
မနေ့ကတည်းက ကျွန်တော် ပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကော်နက်ရှင် မကောင်းတာရယ်..
အလုပ်က မဟားဒယားဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့်ပါ.. ခုတလော အမြဲဝင်မကြည့်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ..
Post ကို ဘလော့မှာ ရေးထားပါတယ်..
သွားမကြည့်နိုင်တော့ရင်တော့ ဖိုင်ကိုပဲ တိုက်ရိုက်ဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်..
အပေါ်မှာ ပျောက်နေတဲ့ဟာတွေထဲက Start Menu အောက်က Help and Support ကို Hide လုပ်သွားတာကို ပြန်ဖော်ချင်တဲ့ကိစ္စ ကတော့ ကျွန်တော့်စာအုပ်ထဲရေးထားတဲ့ထဲမှာ မပါပါဘူး..
Start => Run ကိုခေါ်ပြီး gpedit.msc လို့ရိုက်လိုက်မယ်..
ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ Group Policy Windows ထဲက ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ ..
User Configuration ကို ဖြည်ချလိုက်မယ်.. နောက် Administrative Templates ကို ထပ်ပြီး ဖြည်ချလိုက်မယ်.. ပြီးရင် Start Menu and Taskbar ကို Click နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ညာဘက်အခြမ်းမှာ Key တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီထဲက
Remove Help Menu from Start Menu ကို ဖွင့်လိုက်ရင် ပေါ်လာတဲ့ Remove Help Menu from Start Menu Properties ဆိုတဲ့ Applet လေးထဲက Setting Tab အောက်မှာ
Not Configured ရယ်
Disable ရယ် ကို တွေ့ရပါမယ်..
Enable ကိုနှိပ်ပြီး Apply ပေးထားရင် Start Menu မှာ Help and Support ကို မတွေ့ရတော့ပါဘူး..
Disable ကိုနှိပ်ပြီး Apply ပေးလိုက်ရင်တော့ Start Menu မှာ Help and Support ကို ပြန်တွေ့ရမှာပါ..
ပြန်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ Not Configured ကို ပြန်ရွေးထားပေးပြီး Apply & Ok လုပ်လိုက်လို့ရပါပြီ..